I-Nickel Element - Iinkcukacha kunye neZakhiwo
I-Nickel yeChimicals kunye neZakhiwo zePhysical
Nickel Basic Facts
Inomic Number: 28
Ubunzima be- Atom : 58.6934
Ukufumanisa: I- Axel Cronstedt 1751 (eSweden)
Uqwalaselo lwe-Electron : [Ar] 4s 2 3d 8
Umthombo: I- Nickel yesiJamani: uSathana okanye uNdala uNick, naye, ukusuka ku-kupfernickel: Ubhedu bukaNdala uNick okanye ubhedu bukaMtyholi
I-Isotop: Kukho i-isotop eyaziwayo ye-nickel evela kwi-Ni-48 ukuya kwi-Ni-78. Kukho iisotop ezinesihlanu ezizinzile ze-nickel: i-Ni-58, i-Ni-60, i-Ni-61, i-Ni-62 kunye ne-Ni-64.
Iipropati: I-nickel ye-nickel ingama-1453 ° C, iqondo lokubilisa lingama-2732 ° C, ubukhulu becala buyi-8.902 (25 ° C), ne-valence ye-0, 1, 2, okanye 3. I-Nickel iyitye emhlophe eyicala phezulu. I-nickel inzima, i-ductile, i-malleable, kunye ne-ferromagnetic. Umqhubi omhle wokushisa nombane. I-Nickel ilungu leqela le-iron-cobalt lezinyithi ( izinto zenguqu ). Ukubonakaliswa kwimizimba ye-nickel kunye ne-soluble compounds akufanele kudlule i-1 mg / M 3 (ireyithi yeeyure eziyi-8 ngeyure e-40 ngeyure). Ezinye izakhi ze-nickel (i-nickel carbonyl, i-nickel sulfide) zibhekwa njengento enetyhefu okanye i-carcinogen.
Ukusebenzisa: I- nickel isetyenziselwa ngokuyinhloko i-alloys ifom. Isetyenziselwa ukwenza isinyithi esingenasipuni kunye nezinye iindidi ezinokuxhatshazwa kwe- corrosion . I-tubing ye-alloy-nickel isilly isiling isetyenziselwa ukutshatyalaliswa kwezityalo. I-nickel isetyenziselwa imali kunye neentambo zokulwa. Xa ungeze kwiglasi, i-nickel inikeza umbala oluhlaza.
Ukufakelwa kwe-Nickel kusetyenziswa kwezinye izinyithi ukubonelela ngeengubo zokukhusela. I-nickel eyahlukana ngokuchanekileyo isetyenziselwa i-catalyst for oil hydrogenating. I-nickel isetyenziswe kwakhona kwiikherikhi, magnet, kunye neebhetri.
Imithombo: I- nickel ikhona kwiindawo ezininzi zeemeteor. Ubukho balo buqhele ukusetyenziswa ukuhlula imimeteor ezivela kwamanye amaminerali.
I-iron meteorites (i-siderites) inokuthi ifumane isinyithi edibene ne-5-20% ye-nickel. I-nickel ithengiswa ngezorhwebo kwi-pentland ne-pyrrhotite. Iindleko ze-nickel ore zifumaneka e-Ontario, e-Australia, eCuba nase-Indonesia.
Uhlobo lwe-Element: Utshintsho lweNsimbi
Nickel Data Data
Ubuninzi (g / cc): 8.902
I-Melting Point (K): 1726
Indawo yokubilisa (K): 3005
Ukubonakala: Inkathazo, inzima, i-silvery-white white
I-Atomic Radius (ntambama): 124
Umthamo we-Atomic (cc / mol): 6.6
I-Covalent Radius (ntambama): 115
I-Radiyo ye-Ionic : 69 (+ 2e)
Uhlobo oluthile (@ 20 ° CJ / g mol): 0.443
Ukufudumala ukushisa (kJ / mol): 17.61
Ukushisa kwe-Evaporation (kJ / mol): 378.6
Ukufumana ukushisa (K): 375.00
I-Pauling Negativity Number: 1.91
I-Energy First Ionisation (kJ / mol): 736.2
Amazwe okuxhamla : 3, 2, 0. I-state oxidation eqhelekileyo yi-+2.
Ukwakhiwa kwamathambo: I -Cubic ejongene nobuso
I-Lattice Constant (Å): 3.520
Inani leRejista ye- CAS : 7440-02-0
Abavukuzi baseJalimane abafuna ubhedu beza kubakho i-ore ebomvu ngokukhawuleza. Ukukholelwa ukuba bafumene i-ore yechumbo, babeza kuyifumana kwaye bayifake kuyo. Baya kuthi ke bafumane i-ore ayivelanga ithusi. Bathi igama elithi 'kupfernickel', okanye ubhedu bukaMtyholi, ekubeni uMtyholi uguqule isicatshulwa esibalulekileyo ukuze adibanise abavukuzi.
Ngama-1750, isazi samakhemikhali waseSweden u-Axel Cronstedt sithole ipfernickel iqulethe i-arsenic kunye nento engaziwayo ngaphambili. Siyazi ngoku ukuba ipfernickel yi-nickel arsenide (NiAs).
I-nickel i-ferromagnetic kwindawo yokushisa .
I-nickel ikholelwa ukuba yinto yesibini eyona nto ininzi kwinkalo yomhlaba emva kwentsimbi.
I-nickel yincandelo yensimbi engenasici .
I-Nickel inenqwaba yeengxenye ezingama-85 kwisigidi kwi-Earth crust.
I-nickel inenqwaba ye-5.6 x 10 -4 mg nganye ilitha yamanzi olwandle.
Uninzi lwe-nickel oluveliswa namhlanje lufumana indlela e-alloys kunye nezinye izinyithi .
Abantu abaninzi banqabile kwi-nickel yensimbi. I-Nickel yabizwa ngokuba ngu-2008 Xhumana no-Allergen woNyaka ngu-American Contact Dermatitis Society.
Iingxelo: ILebhu yeSizwe yaseLos Alamos (2001), iCrescent Chemical Company (2001), uLange's Handbook of Chemistry (1952), i-CRC Handbook yeKhemistry & Physics (18th Ed.) I-International Atomic Energy Agency I-database ye-ENSDF (Oktobha 2010)
Buyela kwiThebula lePeriodic
I-Roentgenium Facts - Rg okanye Element 111
Ziziphi i-7 Diatomic Elements?
Yintoni Eyona Mandla Ensimbi?
I-Francium eManzini - Yintoni eyenzekayo Ukuba Ulahla iFrancis kuManzi?
Ubukhulu beZiko kwiTable Periodic
I-Element Densest Element kwiTable Periodic
10 Radon Facts
Iikhokelo ze-Element Facts
IsiCwangciso seSifundo: Ukongeza kunye nokuPhakamisa amaCandelo
Funda amaGama angama-60 aseSpeyin
Uluhlu lweSigqeba soLwimi kwisiMandarin
Izakhono zoFundo kwiNqanaba eliPhakathi labaFundi
Konke NgoMagical Herbalism
Iingcebiso zokuphucula iziTyala zakho zesiLwimi zesiFrentshi
I-WEB Du Bois kwi-Woman Suffrage
Izikolo ze-SAT zokwamkelwa kwiZikolo kwi-University of Ohio
Iimpawu eziphambili zeSteven Soderbergh
Yonke malunga neYule
I-Gray's Anatomy Isiqendu 6: Yintoni eyenzekayo kwinqanaba ngalinye
Iimfuno zokuba nguMongameli we-United States
U-Queen Seondeok woBukumkani bukaSilla
IiVideos zikaMichael Jackson
Ibali loMhlobo kaDamon noPythias
Ulwalamano olutshanje lusetshenziselwa ukulawula izityalo ezinobomi
"Phuma" Iimpawu kunye neengcaciso
Iimpawu zeAtom Kubonisa i-Electron Ukulungiswa kwezinto
Fumana iinjongo zakho ezibhekiselele kwiiHindu Symbolism
Konke malunga ne-Photosynthetic Organisms
Indlela yokuvelisa iinombolo zeRandom kwiRuby
IYunivesithi yaseMissouri yaseYouf University